Askar Xulafada NATO ka tirsan oo Afghanistan lagu diley – Radio Muqdisho
Militiriga Mareykanka ayaa sheegay in qarax is miidaamin ah lagu diley sadex kamid ah ciidanka gaashaan buurta NATO bariga wadanka Afghanistan.
Waxay sheegeen in askari Amerikaan ah in labo kale oo Afghanistaan ahi lagu dhaawacay weerarkaas dhacay maanta oo Axad ah, qaraxa ayaa lala beegsaday askar roodo ku jirtay, hase yeeshee warka ka soo baxay militiriga Mareykanka laguma sheegin dalalka ay u dhasheen askarta la diley.
Weerarkan ayaa waxaa mas’uuliyadiisa sheegatay kooxda Taliban. Wahida Shahkar, oo ah afhayeenka barasaabka gobolka Parwan, ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay meel aan ka fogeyn caasimadda gobolkaas ee Charakar.
Xulafada NATO si rasmi ah ayay u soo afmeereen howlagalkooda Afghanistaan sanadkii 2014, laakiin waxaa wali halkaas ka jooga askar taageero xirfad dhisid ah siinaya ciidanka wadankaas oo qaadaya weerada ka dhan ah kooxaha Taliban iyo Alqaacida.
Deg Deg: Ra’iisul wasaaraha oo magacaabay wasiiru cusub